बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी)
admin October 4, 2021 Uncategorized 0
गाउँमा एकजना भलाद्मी मानि`सकाे नि धन भएछ । उसका छाेरा`हरू र छर`छिमेक मिली ला स जलाउन लैजाने तयारी भइ`रहेको समयमा एक अपरिचित व्यक्ति आउँछ र ला स को पाउ समात्दै भन्न लाग्छ “म र्ने मानिसले मसँग १५ लाख लिनु भएकाे थियाे, पहिला मला`ई उक्त पैसा कसले तिर्ने भन्नुहोस्, त्यस`पछि मात्र ला स काे दाहसं स्कार गर्न लैजानु`हाेस् ।
अब तमाम मलामी`हरू खडा भएर तमाशा हेरिरहेका थिए, छाेराहरूले बताए कि म र्ने मानिसले कहिल्यै कसै`सँग पैसा कर्जा लिएकाे कुरा गर्नु भएको थिएन । त्यसैले हामी याे पैसा दिँदैनाैँ । छाेराहरूले त तिर्दैनन् भने हामी छिमेकी`हरूले त तिर्ने कुरै भएन भन्न लागे छिमेकी|हरू । ला स लाई बाेक्न खाेज्छन् तर त्यस मानिसले ला स काे पाउ समातेर बसि`रहेकाे हुन्छ ।
याे खबर घर`भित्रसम्म पुग्छ । बुहारी`हरू हामी`लाई थाहा छैन र पैसा तिर्दै तिर्दैनाैँ भन्छन । म र्ने मानिस`की एउटी छाेरी पनि थिइन् जाे रुँदै बाहिर आइन् र ला स काे गाेडा समाउने व्यक्ति`लाई आफ्नो गरगहना फुकालेर दिँदै भन्छिन् “लिनुहाेस् यी गहना। यस`लाई बेच्नु`हाेस् र आफ्नो पैसा असुल गर्नुहोस् तर बिन्ति गर्दछु बाबाकाे अन्तिम दा हसं स्कार नराेक्नु`हाेस ।
नपुगेको रकम पछि तिर्छु, सक्दाे चाँडाे व्यवस्था गर्छु । अब ला स समाउने मानिस उक्त छाेरी`लाई सान्त्वना दिँदै भन्छ, “छाेरी, म यहाँ कसैलाई चिन्दिन, उहाँकाे बारेस चिन्नु थियो । मुख्य कुरा त उहाँले मसँग पैसा माग्नु`भएको थिएन, बरू मैले उहाँसँग मागेकाे थिएँ । उहाँ बित्नु`भएको थाहा पाएँ र कर्जा फिर्ता गर्दा कस`लाई दिने हाे भनी बुझ्न याे नाटक गर्नु पर्यो ।
अकस्मात् प्राप्त भएकाे सम्पति`माथि धेरैले आँखा गाड्छन, मलाई सही हकदार चिन्नु थियो । लाै राख याे १५ लाख रुपियाँ र मलाई दिएका सबै गहना पनि फिर्ता लेऊ । यसमा हक तिम्रो मात्र छ । वास्तवमा छाेरी`काे माया जीवनकाे साया हाे ।
छाेरीलाई बचाउने, पढाउने र अघि बढाउने संकल्प गरौँ । जसकाे घरमा छाेरी छिन्, त्याे घर पहिलाे स्वर्ग हाे । यो कथा मन परे शे`यर पनि गर्नुहोला । सामाजिक संजालमा भेटिएको कथा दर्पणनेपाल डटकममा प्रकाशित छ ।
४ वोटा बाघले ओरिपरीबाट घेरेपछि…….
श्रीमान विदेशबाट आएको केहि दिनपछि श्रीमति मृ त भेटिइन, कसले मा ‘र्यो उनलाई (भिडियो हेर्नुस्)
यिनै हुन् ३४ वर्षका लक्का तन्नेरी! भन्छन् ‘मेरो विर्य कुनै स्त्रीलाई दिन्न’ (भिडियोमै हेर्नुहाेस्)
हट एण्ट सेक्सी गायिका ज्योति मगरले पत्रकारसँगै मान्छेको मासु मन पर्छ भनेपछि… (भिडियो सहित)
संसदमै ध्यानाकर्षण गराउने गरि भएको पाँथरको त्यो कारुणिक नरसंहार, आज पनि गाउँनै त्रसित
कारागारमा एकाएक आगलागी हुँदा ३८ जनाको निधन
जनाधार बलियो बनाउँदै दलहरु : कुन राजनीतिक दलमा कति छन् कार्यकर्ता ?